काभ्रेको उग्रचण्डी नाला बनेपामा होम स्टेको आवश्यकता र चुनौती::KhojOnline.com
होमस्टे भनेको स्थायी घर बाँस भएको स्थानबाट अर्को स्थानमा अस्थाई रूपमा भ्रमण गरि कम्तिमा २४ घन्टा समय विताई त्यहाँको आवास,खानाआदि सेवा उपभोग गरि प्राकृतिक सौन्र्दर्य ,स्वच्छ र शान्त वातावरण ,डाँडाकाडाँ , भिरपाखा, हरियाली वनजङ्गल, खोलानाला, तालतलैया, झरना , छाँगा धार्मिक तथा एतिहासिक स्थान र अन्य भौगोलिक , जैविक एवं सास्कृतिक विविधता, ग्रामीण बस्तीमा रमाउने हँसिलो मुहारले पाहुनाहरुको स्वागत सत्कार एवं सेवा पुय¥याउने नेपालीहरु र उनीहरुको दिनचर्या , कला सस्कृतिको अनुभव गर्नुको साथै घर धनी र पाहुनाबीच एक आपसका ज्ञान ,अनुभव ,विचार र उपयुक्त प्रबिधिको आदन प्रदानलगायत एक अर्काका सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउने स–शुल्क बसाई हो ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन पर्बद्धन गर्नुका साथै यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि र धार्मिक पर्यटन तथा कृषि पर्यटनको बिकासको लागि होम स्टे सञ्चालन आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौ तर आर्थिक समृद्धि कुरा गरेर मात्रे हुँदैन् । काम पनि गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि व्यबसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । कृषिको साथ साथै अर्को तर्फ पर्यटन पर्बद्धनका गर्नका लागि होमस्टेले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्छ । होमस्टेमा जाने ग्राहकहरुले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनको अबलोकन गर्न चहान्छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरि यस क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउनु निकै आवश्यक देखिन्छ। यहाका युवाहरुको चाहनालाई मध्य नजर गरि शुरुमा होम स्टे खोल्ने र पछि अनुभव र ग्राहाकको चापलाई मध्य नजर गरि ठुलो सुभिधा सम्पन्न होटेल तिर आकर्षण हुनु पर्दछ । वास्तबमा धुलिखेलमा पनि यसरी नै सानो बाट ठुलो ब्यवसाय बनाएको हाम्रो सामु उदारण छ।
सरकारले होमस्टे सञ्चालन गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै अनुसार हामीले पनि होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएर यस भेगको अवसरलाई पहिचान गर्नु छ । समृद्धिको एउटा आधार ब्यबसाय हो ।कुनै पनि क्षेत्रमा एउता मात्र व्यवसायले आर्थिक समृद्धि हुनको लागि गाह्रो छ त्यसैले पनि होम स्टे ब्यबसाय शुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । होमस्टेमा स्थानीय परिकार ढिलो, सिस्नो, लोकल कुखुराको परिकार, आलुको परिकारहरु ,दुधको परिकारहरु आफै रोजेर खान पाईने, एकान्त वातावरण रहेको , त्यस क्षेत्रका बिभिन्न स्थानको अवलोकन गर्न सकिन्छ । धेरै युवाहरु बिदेश पलाईन भईरहेको अबस्थामा आफ्नै गाउँठाउँमा ब्यबसाय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनी होमस्टे सञ्चालन किन नगर्ने ?
होम स्टे संचालन गर्न थुप्रै चुनौतीहरु छन् । ति चुनौतीहरुलाई पार गर्नुपर्ने अबस्था छ । कुन चाहि क्षेत्रमा चुनौती छैन र ? लगानी बराबर आम्दानी ल्याउनु पर्ने एउटा चुनौती छ । यस होमस्टेलाई प्रसिद्ध बनाउन चुनौती छ । बाहिरी पर्यटक भित्र्याउन चुनौती छ । होमस्टेमा बाहिरी पर्यटकहरु भित्र्याउने लक्ष्य पनि रहेको छ । नालाबाट काठमाडौं गएका समुदायले सहयोग र प्रचार प्रसारमा ठुलो भूमिका खेल्नु पर्दछ । नाला समृद्धिका लागि होमस्टे ब्यबसायको बिकास गर्न जरुरी छ भने बुझाउनु पर्दछ ।
होमस्टे संचालन गर्नु भनेको नै स्थानीय उत्पादनको पर्बद्धन र पर्यटनको बिकास मुख्य लक्ष्य हो । यति गर्न सकियो भने नालालाइ समृद्ध बनाउन कुनै ठुलो कुरा होईन् । त्यसैले समृद्धिका लागि होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउनु मुख्य उदेश्य हो । समृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र पर्यटन प्रबद्र्धन नै मुख्य कुरा हो । यसबाट समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । होम स्टे संचालन पनि ग्राहकको अनुभव पनि साटासाट हुने भएकोले अरु क्षेत्रको सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै जान्छ । अनुभवले नै मानिसलाई परिपक्व बनाउछ ।
नेपालमा धेरै होमस्टे बन्द हुने अबस्थामा छन्, यस्तो अबस्थामा होमस्टे सञ्चालन कसरि संचालन गर्न सकिन्छ ,सोँचे अनुसार आम्दानी गर्न सकिएला त ? यी कुराहरुको सधै हेक्का राख्नु पर्दछ। सबै भन्दा ठुलो कुरा ब्यबस्थापन हो । राम्रो ब्यबस्थापन भएमा ग्राहकको आर्कषण बन्न पुग्यो भने होमस्टे बन्द हुने अबस्था आउदैन् । अहिले राम्रो ब्यबस्थापन भएका धेरै होमस्टेहरु राम्रो तरिकाले सञ्चालनमा आएका छन् । आम्दानी पनि राम्रो गर्न सफल भएका छन् । त्यसैले हामीले राम्रो ब्यबस्थापन र ग्राहकको माग अनुसार होमस्टेलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै होमस्टे ब्यबसाय फस्टाउन सक्छ । होमस्टे ब्यबसाय अहिलेको आबश्यकता पनि हो । नजिकै नगरकोटको अनुभवको पनि आवश्यकता पर्दछ तिनीहरुको साथ र सहयोगको खाँचो पर्दछ। जसरि भए पनि सम्बन्ध सुधार गर्नु पर्दछ । परम्परागत ढंगबाट होमस्टेको ब्यबसायलाई सफल पार्न सकिदैन्, त्यसैले प्रबिधियुक्त बनाउन जरुरी छ । अहिले हामीले सञ्चालनमा ल्याएको होमस्टे आधुनिक हुनु जरुरि छ । त्यसैले पनि हामीले सोँचे अनुसार होमस्टेलाई अगाडि बढाउन सक्छौं । होमस्टेले स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन प्रबद्र्धनमा पनि मद्धत पुग्छ । यसले होमस्टेले मात्रै नभई यस क्षेत्रको बिकास निर्माणमा पनि टेवा पुग्छ ।
अझै नेपालको नमुना योग्य होमस्टे बनाउने योजना बनाएर नालाका युवा अगाडी बढ्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारसमेतले होमस्टेलाई अगाडि बढाउन सहयोग र सहकार्य गर्न जरुरी छ । आर्थिक समृद्धि भन्ने नारा चुनाबमा मात्रै होईन्, ती नारा हामी जस्ता युवाहरुको जोस जाँगरमा पनि लगाउनु पर्छ । अनी मात्रै चुनाबको समयमा गरिएको आर्थिक समृद्धिका नाराले सार्थकता पाउन सक्छन् । त्यसैले पनि यसतर्फ नालाका युवाहरुले ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरिएका छन् । यसमा आफ्नै बनेपा नगरपालिकाले पनि साथ सहयोग र कागजी प्रक्रिया तथा विज्ञापनको ठुलो अपेक्षा राख्न सकिन्छ।